Semalt dia manolo-kevitra ny fandefasana tenim-pirenena tsara indrindra mba hanefana ny fampahalalam-baovao
Raha mikasa ny hanangona angon-drakitra avy amin'ny tranonkala isan-karazany ianao ary te hampandroso ny asanao , tokony hianatra fiteny fandaharana sasany ianao. Misy fitaovana maromaro ho an'ny amin'ny angona avy amin'ny blaogy sy ny tranonkala, fa ny tenim-pandrindrana kosa dia manamaivana kokoa ny fampahalalana manan-danja sy tsy misy dikany raha tsy mandà amin'ny kalitao. Ny fitadiavana ny fiteny tsara indrindra ho an'ny ny fanasitranana tranonkala dia zava-dehibe. Raha efa nahafantatra ny fiteny programa ianao, dia ho afaka hamoaka haingana ireo tranonkala samihafa.
Ireto manaraka ireto ny sasantsasany amin'ny endri-tsoratry ny programming izay tokony tokony:
Flexibility PHP dia fiteny iray mora ampiasaina sy mora ampiasaina - cheapest windows virtual server hosting. Izany dia amin'ny fiteny tsara indrindra amin'ny famolavolana tsara miaraka amin'ny tombontsoa maro.
Ny fahafahana mamatsy ireo tahiry Tokony hanana fahafahana hamahana ireo tahiry samihafa amin'ny fomba tsotra.
Ny fahaiza-mandanjalanja Python sy PHP dia tenim-pahefana roa fototra izay manampy amin'ny fitadiavana ny tranonkalanao ary hanatsara ny fikarohana karazan'ny tranonkala fikarohana.
Maintainability C ++ dia tenim-pamantarana mora ampiasaina izay tsy mila fahalalana ara-teknika.
Fanamafisana ny famaritana - Ny tranonkala dia azo hokosaina raha tsy ampiharina mora foana ny fandefasana programa ary tsy mila code vitsivitsy afa-manomboka amin'ny data .
Fitomboana HTML dia fiteny iray feno izay manolotra safidy maro ho an'ny sifotra. Manampy amin'ny fanakanana ireo antontan-taratasy HTML izy ary manome ny vokatra irinao avy hatrany.
Ny fiteny fandaharana tsara indrindra amin'ny fandinganana ny tranonkala sy ny famafàna angona:
Node. js dia tsara amin'ny fitadiavana vohikala sy blôgy ary mampiasa code maodilim-bola mba hahavitana ny asanao. Ity teny ity dia atolotra ho an'ny tranokala lehibe sy tetikasam-pitrandrahana data.
C sy C ++:
C sy C ++ dia tenim-pirinty malaza roa noho ny fandinganana tranonkala. Tsara ho an'ny orinasa madinika sy blôgy vaovao izy ireo. Fa raha te hitsikilo pejy web dynamique ianao dia tsy tokony hifidy an'i C sy C ++.
PHP dia iray amin'ireo fiteny malaza sy mahagaga indrindra amin'ny fitrandrahana angon-drakitra. Azo atao ho an'ny orinasa sy ny mpandrindra ny programa, fa ny tsy fahampian'ny fanohanana marevaka dia ny tsy fahombiazany. Noho izany, PHP dia tsy mety amin'ny tetikasam-pitrandrahana sarotra.
Python dia toy ny mpanelanelana rehetra ary mitantana ny fikolokoloana amin'ny aterineto sy ny fizotran'ny angon-drakitra. Soupa tsara tarehy sy Scrapy dia rindrambaiko malaza roa mifototra amin'ny Python.
Ny fiteny fanoratana tsara indrindra amin'ny tranonkala manala ny tranonkala:
PHP dia fiteny ampiasaina amin'ny scripting, ary tsy ilaina ny mahatsiaro ny fomban-draharaha mamolavola azy. Fitenenana ampiasain'ny tranonkala izany raha te hahazo vokatra tsara. PHP dia mahatonga anao ho mora ny manakona tranonkala manintona ary mahazo vaovao mahasoa tsy ho ela.
Raha vao fantatrao mikasika ny lafiny tsara sy ratsy amin'ny fiteny rehetra ny programa dia ho mora ny manala ny angona avy amin'ny tranonkala fototra sy haingana. Miaraka amin'ny PHP, afaka manangona mora foana ny vavahadin-tserasera, tranokala e-commerce, famoaham-baovao ary bilaogy manokana. Ity fiteny ity dia tsy vitan'ny hoe manakona antonta-doko maivana fa mandika ny tranokalanao ihany koa ary manatsara ny fikarohana karazam-pikarohana.